एप्पलले सुधार गर्दछ र ब्यागेल इमोजी डिजाइनलाई एक मोड दिन्छ क्रिएटिव अनलाइन
सत्य यो हो कि इमोजीहरू आफैंले प्रशंसकहरूको एक ठूलो संख्या छ। विशेष गरी मेसेजिंग अनुप्रयोगहरू र अधिक मार्फत हाम्रो दैनिक कुराकानीहरूको मुख्य अंश बन्नको लागि। अहिले हो एप्पल एक कि एक चट्टान र हार्ड स्थान को बीचमा देख्नु पर्छ समीक्षाको लागि उसको बेगेल इमोजी डिजाइनको लागि प्राप्त भयो।
र यो एप्पल हो कि थियो ब्यागल ईमोजीलाई स्पिन दिनुहोस् यसलाई मीठो बनाउनको लागि र अघिल्लो डिजाइन जस्तो सुख्खा छैन। अर्को शब्दमा, यो "डोनट" लाई दुई प्रकारको क्रीम वा क्रीम बिना दुई भागमा विभाजन गरिएको हो, जुन भित्र भित्री सामग्रीको साथ धेरै स्वादिष्ट हुन्छ।
थिए ब्यागेल प्रेमीहरू, जसमध्ये न्यू योर्कहरू अलग देखिन्छन्, जसले पहिले नै यो इमोजीको आलोचना गर्‍यो जुन यो अघिल्लो इमोजीमा धेरै ड्राई देखिन्थ्यो।
यो भएको छ आईओएस १२.१ बिटा version संस्करण जसमा ब्यागलको नयाँ डिजाइन अधिक रमाइलो उपस्थितिको साथ सुरू गरिएको छ र यसले हामीलाई मिठाइको लागि हाम्रो तृष्णा पूरा गर्न एउटा किन्न पनि जान सक्छ।
उजूरीको जवाफ दिन, एप्पलको ब्यागेल इमोजी भर्खरको आईओएस १२.१ बिटामा अपडेट गरिएको छ pic.twitter.com/k5l67QZldf
- जेरेमी बर्गे? (@jeremyburb) अक्टोबर 15, 2018
यो पहिलो पटक होइन कि कम्पनीले धेरैको आलोचना सुन्नु परेको छ, किनकि यो गुगलको साथ भयो उसको ह्यामबर्गर इमोजीको साथ; र त्यो बुद्धिमानीपूर्वक, अब एप्पल जस्तै, सुधारियो।
र भएको छ च्यानल ट्विटर जसको माध्यमबाट अपडेट घोषणा गरिएको थियो त्यो ब्यागेलको डिजाइनमा अब क्रीम के हुन्छ समावेश गर्दछ। यो जेरेम बुर्गे हो जसले ब्यागेल अवधारणा देखाउनको लागि अघिल्लो ब्यागल डिजाइन बिल फिट गर्दछ भन्ने संकेत गर्‍यो, यद्यपि यो नयाँ डिजाइन हो जुन अझ रुचिकर देखिन्छ।
निस्सन्देह, तिनीहरू सफल भए कि हामी थोरै भोकको बिच र हामी मिठाईको लागि त्यो भूख सन्तुष्ट पार्न चाहन्छौं; हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं अन्य जिज्ञासु इमोजीहरू.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » एप्पलले ब्यागल ईमोजीलाई आलोचकहरूलाई खुशी पार्न एक मोड प्रदान गर्दछ